Eo Ambany Fifehezan’ny Filoha Tiorka Ve Ireo Orinasa Aterineto Lehibe Indrindra Eto An-tany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2015 8:24 GMT
Ny fomba fijerin'ny olona ny fandraràn'i Torkia ny Twitter. Nozarazaraina be.
Nahitsoka indray any Torkia, ny 6 Aprily teo, ny Twitter sy ny YouTube, nahatonga fimenomenonana tany anatin'ireo tambajotra sosialy.
Tamin'ity indray mitoraka ity, natao ilay fanitsohana taorian'ny fampitampitàna be an'ireo sary avy tamin'ny fakàna an-keriny tamin'ny 31 Martsa izay niafara tamin'ny fahafatesan‘ilay mpampanoa lalànan'ny governemanta, Mehmet Selim Kiraz, sy ireo mpikatroka roa avy amin'ny elatra havia.
Voalaza fa nesorina ny alin'ny 6 Aprily ilay fibahanana ny Twitter, taorian'ny nanekeny ny fangatahana famafàna nataon'ireo manampahefana Tiorka. Haingakaingana kokoa ny Facebook namaly ny fangatahana ka vetivety monja no naha-voabahana azy. Hita ho namaly ny fangatahana famafàna ihany koa ny Google, araka ny didim-pitsaràna ny 6 Aprily, nahasoroka ny fibahanana azy tanteraka.
Araka ireo vinavina sasany, mampiasa ireo media sosialy ny antsasaky ny mponin'i Torkia, ary 12 ka hatramin'ny 14 tapitrisa no mampiasa Twitter fotsiny. Tsenam-barotra goavana be tokoa io.
Nilaza i Ibrahim Kalin, mpitondra tenin'i Erdogan, tamin'ny fanambaràna ofisialy fa tsy tokony raisina ho toy ny fanohitohinana ny fahalalahana maneho hevitra ny fandraràna ireo tambajotra sosialy. Nambaran’ny BGN News ho nilaza izao izy “ho diso ny fijery ny fandraràna ny media sosialy ho toy ny fameperana ireo fahalalahana.” Ny tanjon'ireo fandraràna– izay avy tamin'ireo didim-pitsaràna — araka ny teniny, dia ny hamerana ny “fanapariahana ny fampielezan-kevitra fampihorohoroana.”
Fiarovana ny ‘soatoavin'ny fianakaviana’ (ary ny antoko eo amin'ny fitondràna)
Hatry ny fifidianana ny volana Aogositra, maherin'ny 70 ireo olona nohenjehina ho “nanala baràka” ny Filoham-pirenena Erdogan, taminà tranga maro tao amin'ny media sosialy. Nandritra ny fotoana naha Praiminisitra an'i Erdogan, efa nisy an-jatony ny tranga sahala amin'izany. Taloha kelin'ilay fakàna an-keriny, roa malaza mpanao sariitatra ao amin'ilay gazetiboky Penguen mpanesoeso mivoaka isan-kerinandro no nahazo sazy 11 volana an-tranomaizina ho “nanala baràka” ny filoha.
Hatry ny nahalasa nalaza be tamin'ny Aterineto ny hetsi-panoherana Gezi , toa noraisin'ny antokon'i Erdogan, AKP (Fitsaràna sy Fampandrosoana), izay eo amin'ny fitondràna ho sakana lehibe eo amin'ny lazany ny Facebook, Twitter ary ny YouTube. Taorian'ny famonoana an'i Kiraz, mpampanoa lalàna, ny 31 Martsa, miely ny siosion-dresaka fa misy angom-baovao avy amin'ny governemanta mety hiporitsaka tsy ho ela any amin'ireo tambajotra sosialy, momba ny fahafatesan'ilay mpampanoa lalàna, izay tena mety hamotika ny antoko, na dia mila porofoina ary izany tranga izany.
Afaka nandingana ireo fibahanana faobe ireo ny sasany amin”ireo mpampiasa Twitter tany Tiorkia ary afaka niditra tamin'ny vohikala tamin'ny alalan'ny “proxies”.
Araka ny nanipihan'i @SpiritOfGezi hoe:
Bitsika miisa 3 TAPITRISA no nalefa tao #Torkia hatry ny nandidiana ny fibahanana ny twitter&mbola manohy manisa ;=) #TwitterisblockedinTurkey (voabahananyTwitteranyTiorkia)
Fa tsy mihatra amin'ny rehetra io — mahita vahaolana haingana amin'izany ireo olona mpahay teknolojia, fa ny sasany tsy manam-bitana loatra toy izany. Toa miaiky ireo mpandinika ny sehatry ny media ao amin'ny firenena fa raha tiana hanenàna ny fampiasàna ny media sosialy ao amin'ny firenena no anton'ilay fibahanana, fantatr'ireo manampahefana tsara fa tsy hahavita hanaisotra tanteraka ny fifampiresahana ao amin'ny Twitter io fibahanana io.
Bitsika alefan'ny olona izao ny momba ny tsy mampahomby ny fibahanana ny Twitter. Ny afaka tena hampitahàna azy dia ny hoe firy ny isan'ireo bitsika nalefa teo aloha.
Maneho hevitra ny Tiorka iray mpahay momba ny fiarahamonina sy manampahaizana momba ny media, Zeynep Tufekci, fa ny tena tanjon'ny hetsik'i Erdogan dia ny “hanaratsy endrika” ny media sosialy ary hampiseho an'io ho loza mitatao ho an'ny “lanjan'ny fianakaviana” ary ny firaisankinam-pirenena. Manoratra izao izy:
Tsy miezaka ny hibahana ny media sosialy arakany loko omena azy io i Erdogan.
Tsy eo amin'ny fahafahan'ny Aterineto mizara ny resaka kolikoly sy ny fahafahan'ny governemanta manafoana ireny ny ady. Ny ady dia eo amin'ny fo sy ny sain'ireo mpanohana an'i Erdogan, ary ny hoe, mety ho resin'i Erdogan lahatra ve izy ireo hoe sehatra mampidi-doza, tsy afaka fehezina, maloto izay tsy misy zavatra tsara azo tsoahana ireo media sosialy.
Hatry ny naha-lany ho filoha an'i Erdogan, novainy nasiany fetrany hatrany ireo zon'ny mpisera amin'ny Aterineto, tamin'ny fanovàna ireo lalàna mahakasika ireo zon'ny Aterineto. Misy lalàna natao fiarovana ho laniana ato ho ato, izay manome alalana ireo manampahefana hanao sivana sy fanarahamaso midadasika be, tsy mila fanaraha-maso mialoha ataon'ny fitsaràna .
Ny tena mampitahotra dia, ny fandraràn ankehitriny dia tonga alohan'ny fametrahana ilay lalàna nasiana fanovàna momba ny Aterineto. Rehefa tafapetraka io, tongasoa ny ‘didy amin'ny tany tsy milamina'!
Miaraka amin'ny Tiorkia izay manakaiky ny fifidianana solombavambahoaka, izay miteraka rivotra politika mafanafana ao amin'ny firenena, mitady hevitra bebe kokoa hanampenam-bava ireo vahoaka manohitra azy sy ny AKP i Erdogan. Mitondra azy ireo ho amin'ny dingana manakaky io tanjona io ny fanampenam-bava ireo mpanohitra ao amin'ny media sosialy.
Manaraka ny onjany
Nitatitra ny Al Jazeera ao Tiorkia, ny Talata alina, tsy ela taorian'ny nanalàna ilay fibahanana ny Twitter, fa misy didim-pitsaràna Tiorka hafa indray mikendry ny Google. Manome ora efatra ho an'ny Google ilay didim-pitsaràna mba hanalàny ireo sary rehetra mikasika ilay fakàna an-keriny, raha tsy izany dia hiatrika fibahanana. Amin'izao fotoana hanoratana ito lahatsoratra ito izao, mampiseho sary vitsy noho ny teo aloha momba ilay fakàna an-keriny ilay mpampanoalalàna ny fitadiavana Sary ao amin'ny Google, ary– araka ny hita — tsy nobahanana io tolotra io.
Araka ny Tatitra Mangarahara in-droa isan-taona an'ny Twitter, teo anelanelan'ny 01 Jolay sy ny 31 Desambra 2014, nangataka ny Twitter hitàna bitsika miisa 2.642 isa ny governemanta Tiorka. Ny fitambarany, nitàna bitsika miisa 1.820 nangatahan'ny governemanta ny Twitter, izay 92 isan-jaton'ny bitsika notànany nandritra izay fotoana izay. Eo anilan'izay, ny tarehimarika nolazain'i Tiorkia dia milaza 72 isan-jaton'ny tarehimarika notazonin'ilay tolotra nandritra ny enim-bolana.
Noho ny fahombiazany amin'io fomba fanao io, toa vao maika nampiakarin'ny governemanta Tiorka ny lentan'ny lalao. Hatramin'ny nivoahan'ilay tatitra mangarahara an'ny Twitter — izay naneho ny asa natao niantomboka ny 1 Janoary – 30 Jona 2014 — nilaza toy izao ny Twitter: “Nahazo fangatahana 156 isan-jato mahery izahay [avy amin'i Tiorkia], ary tarehimarika mitombo maherin'ny 765 isan-jato ho an'ny kaonty voafaritra manokana [mba hotànana].”
Antontan'isa mahatohina mitovitovy amin'izay no navoakan'ny tatitra mangaraharan'ny Facebook.
Ankehitriny toa hita fa manao izay ho afany amin'izao mba hanadiovana io ny Twitter, Facebook ary ny Google, miala lavitra amin'ny fanomezana endrika ratsy ny fitondrana Tiorka.